Obbo Dajanee Xaafaa dhukkubaaf saaxilamaa jiru jechuun maatiin yaaddoo qaban ibsan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Dajanee Xaafaa dhukkubaaf saaxilamaa jiru jechuun maatiin yaaddoo qaban ibsan
Obbo Dajanee Xaafaa dhukkubaaf saaxilamaa jiru jechuun maatiin yaaddoo qaban ibsan.
Obbo Dajjannee Xaafaa Galataa barreessaa ol-aanaa fi gorsaa seeraa KFO ti. Torban lama dura human Abiy itti bobbaaseen hidhaman. Yeroo kana keessatti yoo xiqqaate gara mana hidhaa shanii olitti hidhameera. Guyyaa kaleessaa kana moo mana hidhaadha baasanii sababa koronnaan shakkamtee jirta jechuun achii fudhanii gara hositalaa Kotoobee geessan. Hospitaala Kotoobee immoo kan deemu nama shakkame osoo hintaane, nama dhibee kanaan qabameedha. Guyyaa har’aa maatiin ache deemanii argachuu hindandeenye. Sababa kanaan maatiin obbo Dajjannee xaafaa yaaddoo hamaa keessa galanii jiru.
Obbo Dajanneen hojjii dhaabaa cinaatti hojjii Abukaatummaa( gorsaa seeraa) ta’uun maatii isaa nama tajjajiludha. Galiin achirraa argatunis maatii isaa tajjaajila. Yeroo amma kanas, haati manaa isaanii ulfa waan ta’aniif qobaa isanii maatii tajjaajiluun haalaan rakkisaa itti ta’eera. Kanaaf uummatni Oromoo keessaaf alaan isaaniifi hidhamtoota Oromoo hundaaf karaa danda’amaa ta’een sagalee haataanuf.
#FreeOromia #OromoProtests #FreeDajaneeXaafaa #FreeAllPoliticalPrisoners
This coupled with the other harrowing accounts that senior opposition figures are, inadvertently or otherwise, are exposed to #covid-19 would have devastating consequences!
People need to smarten up than this? Man, and why school compounds? https://t.co/0eaXOQmAlP
— Mohamed Olad 🐪 (@oladmohamed) July 23, 2020
Obbo Dajanee Xaafaa
Hoogganota Olaanoo Kongirasii Federaalawaa Oromoo (KFO) ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaa jiran keessaa tokko kan ta’an barreessaan paartichaa Obbo Dajanee Xaafaa koronaavaayirasiin irratti argameera shakkii jedhuun hospitaala Eekkaa Kotabee galunsaanii maatiin himan.
(bbcafaanoromoo)—Haati Warraa isaanii Aadde Assellefech Mulaatuu, Obbo Dajaneen waaree dura ambulaansiin fuudhamanii hospitaala Eekkaa Kotabee kan namoonni Covid-19n qabaman itti yaalaman galuu BBC’tti himaniiru.
”Obbo Dajaneen ni shakkaman malee qabamuun isaa natti hin himamne garuu namoota 16 wajjin hidhaman keessa afur dhibee kanaan qabamaniiru” jedhan.
Haata’u malee, hospitaalli Eekkaa Kotabee kan namoonni vaayirasichaan qabaman qofti itti yaalaman ta’uu BBCn hojjetaa hospitaalichaa irraa mirkaneeffateera.
Adda Assellefech akka himanitti, abbaan warraa isaanii erga to’atamanii torban lama kan guute yoo ta’u, yeroo sana naguma isaanii turan jedhan.
Maayikalaawwirraa gara mana barumsaa Inqulaal Faabrikaa jedhamu bakka dhibee kanaaf isaan saaxilu tursiisan kan jettu haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa, manni inni keessa ture ijoolleen baayeen koronaavaayirasiin qabamanii kan keessaa bahan ta’u odeeffannoo akka qaban himu.
Sababiidhuma koronaavaayirasiitiif jecha nyaata manaa akka hin geessineef dhorkamuus himan.
Qorannoon kaleessa vaayirasichaarraa bilisa ta’uu itti himamulleen deebiyamee namoota koronaavaayirasiin shakkaman faana waan turteef bakka tursiisaa deemtaa jedhanii fudhanii deeman jetti.
“Hospitaalicha deemnaan ammoo to’annoo poolisii jala jira jedhamuun dubbisuu nu dhorkan,” jedhu Aadde Asselefech.
Gama kaaniin haalli fayyaa Obbo Dajanee Xaafaa hanga guyyaa kaleessaa sa’aa 3:00ti nagaa akka ture kan himan abukaatoon isaanii maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan, “kutaa Obbo Dajaneen itti hidhamanii turan keessa namootni 11 koroonaan qabamanii turan,” jedhan.
Obbo Dajaneen qorannoon dhibee Covid-19 erga taasifameef booda dhibicharraa bilisa jedhamanii akka turan kan himan abukaatoon isaanii kun guyyaa kaleessaa hospitaala Eekkaa Kotabee geeffamuun darbii lafa jalaa keessatti hidhamuu isaanii himan.
Dhibee Covid-19n qabamuufi dhiisuu Obbo Dajanee Xaafaa yeroo deebisan “wanti mirkanaa’e hin jiru. Boodarra yeroo dhageenyu kutaa namootni koroonaan qabaman keessa waan tureef carraa qabamuutu jira waan jedhu shakkiidha malee qorannoon adeemsifamee koroonaavaayiraiin qabame jedhamee wanti mirkanaa’e hin jiru,” jechuun deebisan.
Guyyaa har’aa gara mana murtii deemun iyyannoo akka galfatan kan himan abukaatoon Obbo Dajanee Xaafaa, “akkaataa firri ittin gaafachuu danda’u. Nyaatallee akkatti dhiyeessuufii dandeenyuufi haala bilbilaanillee nu waliin qunnamuu danda’u manni murtii akka ajaja nuuf laatu ni gaafanna,” jedhan.
Reeffi artiist Haacaaluu Hundeessaa gara maatiitti akka hin deemne ittisuu fi gara magaala Finfinneetti akka deebi’u taasisuun jeequmsi akka ka’u taasistaniirtu jedhamuun kan shakkaman Obbo Dajanee Xaafaa yeroon beellamaa guyyaa 10 irratti gaafatamee Adoolessa 19 bara 2012 beellamamuu isaanii abukaaton isaanii himaniiru.
Odeeffannoo dabalataaf hoogganota hospitaalichaa, Poolisii Finfinneefi Federaalaa, akkasumas Ministeera Fayyaafi Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itophiyaatti bilbillus argachuutti hin milkoofne.
‘Hooggantoota paarticha hidhuufi waajjiraalee caccabsuun dhaabicha dadhabsiisaa jira’
Gama biraatiin ammoo KFO’n sadarkaa godinaafi aanaatti waajjirraaleen jala caccabuufi saamamuu akkasumas, hooggantoonni ammoo jalaa hidhamaa jiraachuu komataa jira.
Mootummaan waajjiraalee paartichaa caccabsuufi hoogganota olaanoofi jiddugaleyyii hidhuun dhaabicha dadhabsiisuutti jira jedhu Itti-Gaafatamaan Waajjira Muummee KFO Obboo Xiruneeh Gamtaa.
Waajiraaleen aanaaleerraa qabanis guutummaatti haala jedhamuun cufamaniiru ykn cabsamuun saamamaniiru jedhan.
Arsii aanaalee Kokosaafi Kofalee dabalatee aanalee 14, akkasumas Agaarfaa keessattis humna mootummaatiin cabsamanii saamamaniiru jedhu.
Kofaleettii halkan kan cabe, garuu otoo namni arguu saamame akka Obbo Xiruneeh dubbatanitti.
“Namoota mootummaan bobbaase cabsuu addaan baafamee beeekameera. Hooggantoonni maaliif ta’e jedhanii gaafatan ni reebamuu, kaanis ni hidhaman.”
Hooggantonni waajiraalee kana hoogganaan wayita hidhaman, waajiraaleen ammoo ni cufaman kan jedhan Obbo Xiruneeh, amma sadarkaa hojjachuu hin dandeenyerra geenyeerra jedhu.
Yeroon amma keessa jiru waanta ta’e gaafachuufis ta’e marisiisuuf mijataa miti kan jedhan itti-gaafatamaan Waajira KFO kun miseensoonni paartii isaanii olaanoo kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammad, Hamzaa Booraanaafi Guutu Mul’isaarraa kaasee amma godinaaleetti kanneen jiran hidhamaniiru jedhu.
Hooggantoonni paartichaa Godinaalee akka Harargee Bahaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaafi Shawaa Kaabaarraa turan hidhamaaniru jechuun hooggantoonni paartichaa hidhamuusaaniitiin koreen hojiisaa akka hin hojjenne dadhabsiisuu kaasu .
Komii paartiin KFO kaasu kanaaf Dubbi-himaan mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetachoo Baalchaa garuu ‘nuti warra isaan bobbaasantu qabeenya caccabse jenna ‘ jechuun waakkatan.
Kan isaanii itti dabalanii caccabsuu danda’u, qabeenyi caccabeera kan eenyuyyuu haata’u jedhan.
Du’uu namaafi caccabuu manaatiin siyaasa hojjachuudhaaf fedhisaaniiti jechuun deebisanii himatu Obbo Getaachoon.
Obbo Geetachoon hooggantoonni KFO olaanoofi godinaaleerra jiran mana hidhatti funaanuun hojiisaanii dadhabsiisuu ilaalchisee gaafatamanii ‘miseensa paartiiti ykn hoogganaa paartiichaa ta’usaanif otoo hin taane, yakkaan waan shakkamaniif hidhaman’ jedhu Obbo Geetachoon.
Dhaabbileen mootummaa 104, kan hafan kan dhuunfaarra miidhaan qaqqabuu himaniiru dubbi-himaan kun.